तपाईको देशको १: 1०,००० पानाहरूको UTM ग्रिड डाउनलोड गर्नुहोस् - Geofumadas
1 को UTM ग्रिड डाउनलोड गर्नुहोस्: तपाईंको देश बाट 50,000 पानाहरू
मे, 2008 कार्टोग्राफी, गुगल अर्थ / नक्सा, मितोल्ड GIS
१: ,1०,००० पानाहरू धेरै देशहरूको कार्टोग्राफीमा राम्रोसँग चिनिन्छन्, सुरुमा तिनीहरू अमेरिकाको लागि डाटा NAD50,000 सँग निर्माण गरिएको थियो। यस अवस्थामा मैले तिनीहरूलाई WGS27 मा उत्पन्न गरेको छु; यो विश्वास गर्न गलत छ कि तिनीहरू केवल भेक्टरलाई सार्नाले प्रक्षेपण परिवर्तन गर्न सकिन्छ किनकि केही व्यक्ति साना क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्थे।
1 50, स्पष्टीकरण भनिन्छ बनाउन 000 छोड्छ: यो मुद्रण लागि केही देशहरूमा प्रयोग आकार छ 1 किनभने तपाईं सम्झना भने, पहिले अप क्षेत्रहरु, अब म एउटै क्षेत्रमा अपलोड तर 50,000 को reticle संग छोडेर गएका थिए तर यो म्याप नाम '1 द्वारा' आदर्श 30'1 पात हुनेछ
यी पानाहरू भौगोलिक निर्देशांक बनाइएका र तिनीहरूले पोल जाँदा बन्द छन् इक्वेडर देखि Arcs निर्माण भनी सीधा खण्डहरूमा बनाउँछ जो अक्षांश, '1 द्वारा' लामो 30'1 छ छन्; यो एक क्षेत्र भित्र यी सदिश नै झुकाव कोण भएको एक छैन कि implies।
यसैले यी पानाहरू भौगोलिक समन्वयहरूबाट निर्माण गरिनुपर्छ, यो उदाहरण हेर्नुहोस्:
मेक्सिको को दक्षिणी तट मा 14 क्षेत्र को सही अन्त मा कार्यपाना प्रयोग लगभग 26,696 मीटर नै अन्त मा, तर अटलांटिक तट उपाय मा 26,171 मीटर, उच्च अक्षांश मा बन्द छ रूपमा गर्दा लामो छ।
मेरो अन्तिम वर्षको लागि कम्तिमा यी क्षेत्रहरूको एक जोडी सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ कि उनीहरूले नक्साको तराजुमा कसरी काम गर्छन् भनेर वर्णन गर्न सक्षम हुन। त्यसोभए, मसँग त्यतिखेर के थियो मैले फर्कनुपर्थ्यो; र ती तरिकाले यसले धेरै राम्रो गर्छ:
ग्रिड कसरी बनाउने?
Manifold GIS प्रयोग गर्दै केवल दुई चरणहरूमा गरिन्छ:
1। नयाँ तह सिर्जना गर्नुहोस्
फाइल / सिर्जना / रेखाचित्र
त्यसपछि हामी प्रक्षेपण प्रदान गर्छौं, दायाँ क्लिक "ड्राइंग" मा "प्रोजेक्ट असाइन", र UTM, क्षेत्र 16, उत्तर चयन गर्नुहोस्
2। मेष सिर्जना गर्नुहोस्
म जोन १ 16 को लागी ग्रिड छान्छु, जुन देशान्तर to 84 देखि। ० सम्म जान्छ, म यसलाई नकारात्मकमा छोड्छु किनकि यो ग्रीनविचको पश्चिममा छ। अक्षांशसम्म, भूमध्यरेखाबाट र म यो पोलमा पुग्न चाहन्नको लागि, म शून्यबाट 90२ लाई छान्छु। दायाँपट्टि म जाल चाहान्छु, जुन पातहरूको आयाम १: ,72०,००० हो, मेरो केसमा ती मापन १ देशान्तर ''०' र अक्षांश १ ': १''० 'लेख्न म १. 1 लाई divide० बाट विभाजित गर्दछ जुन ०.२50,000 डिग्री र १/1० हुन्छ ० ०.30 डिग्री हुन्छ।
यसले मलाई छनौट गर्ने (टाइलहरू), बिन्दुहरू, क्रसहरू छनौट गर्ने विकल्प पनि दिन्छ। मैले रेखाहरू छनौट गर्दछु
त्यसपछि म "सिर्जना" बटन क्लिक गर्नुहोस् र "ठिक"
अन्य क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु तिनीहरूको प्रोजेक्शन परिवर्तन गर्ने कुरा हो। एक पटक UTM क्षेत्रहरू गुगल अर्थमा रूपान्तरण भएपछि, तिनीहरू यस्तो देखिन्छन् (लुकाउने क्षेत्र १ which जुन मैले सुरुमा सिर्जना गरेको थिए)।
त्यहाँ तपाईंले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ:
मेक्सिको ११, १२, १ 11, १ 12, १ and र १ z जोनमा छ। सबै उत्तरी गोलार्धमा।
15 र 16 क्षेत्रहरुमा ग्वाटेमाला र एल साल्भाडोर
16 र 17 क्षेत्रहरुमा हन्डुरस, निकारागुआ र कोस्टा रिका,
17 र 18 क्षेत्रहरूमा पानामा
कोलम्बियामा 17, 18 र 19 क्षेत्रहरूमा, जटिलता संग यो उत्तरी गोलार्ध दुवै र दक्षिणी गोलार्धमा,
पेरू 17, 18 र 19 क्षेत्रहरु मा,
19, 20 र 21 क्षेत्रहरूमा बोलिभिया,
18, 19, 20 र 21 क्षेत्रहरु मा अर्जेंटीना,
चिनियाँ 18 र 19 क्षेत्रहरूमा
उत्तरी गोलार्द्धमा दक्षिणी गोलार्द्धमा 18 देखि 25 र 19 सम्म 22 क्षेत्रमा ब्राजिल,
भेनेजुएला मा 18, 19, 20 र 21 क्षेत्रहरु
21 र 22 क्षेत्रहरु मा उरुग्वे,
20 र 21 क्षेत्रहरुमा पराग्वे,
एक्वाडोर 17 र 18 क्षेत्रहरूमा।
यसले UTM जोन्स एउटै यूरोपा ग्रिडसँग 27 क्षेत्रबाट 37 क्षेत्रमा देखाउँछ; सबै उत्तरी गोलार्धमा।
यदि तपाईंसँग GIS मनिल्ड छैन भने, तपाईँले यहाँ kmz फाईल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाइँ Google Earth संग खोल्न सक्नुहुन्छ:
यदि तपाईं सबै जोनहरू लिन रूचि राख्नुहुन्छ भने, निम्न लिंकमा तपाईं एक फाईल किन्न सक्नुहुन्छ जुनमा सबै यूटीएम क्षेत्रहरू छन्। जोनहरू समावेश गर्दछ:
तपाई यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ क्रेडिट कार्ड वा पेपैलसँग
Bentley Systems DGN DWG Google धरती KML मितोल्ड GIS मेरो egeomates SHP
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो 2008 हो अर्ध-फाइनलहरू
अर्को पोस्ट पारिवारिक मनपर्ने खिलौनेअर्को »
२ Rep लाई जवाफ दिईयो "तपाईंको देशको १: 29०,००० पानाको UTM ग्रिड डाउनलोड गर्नुहोस्"।
जुलाई, 2018 बजे
यो सजिलो छैन किनकि यो ग्रिड छैन। देशको स्तरमा ती रेखाहरू हुन् जसमा वक्रता प्रदर्शित हुन्छ। यसबाहेक, यदि नक्सा एकै मापनमा छैन भने यसलाई ट्रेस गर्न टेम्प्लेट बनाउन गाह्रो छ।
एउटा तरिका INETER नक्सामा modeled ग्रिडको, छ कि एक स्पष्ट प्लास्टिक टेम्पलेट बनाउन हुन सक्छ, र यो जो एउटै स्तरमा छन् अन्य नक्सा, यसलाई पहिल्याउन; म तिनीहरूलाई जहाँ तपाईं समानान्तर वा भूमध्यरेखासँग चौबाटोहरु पहिचान गर्न सक्छन् सीमा को ज्यामिति मा अंक पहिचान गर्न नयाँ चाल थपियो सक्छ, र यदि यो तेर्सो र ठाडो रेखा को एक ग्रिड sifuera रूपमा भन्दा लिइरहेको सहित स्कूल छोराछोरी, को लागि हो (जो छैनन्)
aldo zeas भन्छिन्:
निकारागुआबाट शुभ साँझ, म पहिलो सामाजिक विज्ञान शिक्षक हुँ र मेरो देशमा भूगोल वर्गहरू सिकाउँछु, तर म उत्सुक छु कि कसरी मुद्रित नक्सामा ग्रिड स्थापना गर्ने बारे जान्न उत्सुक छु, र मलाई पछि लाग्ने प्रक्रिया जान्न आवश्यक छ। कक्षामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नुहोस्। धन्यवाद
अगस्ट, 2017 बजे
त्यहाँ 15 र 16 क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरु मध्ये ग्वाटेमाला हो
ओस्कार Leonel भन्छिन्:
तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ; मलाई ग्वाटेमालाका लागि यस्तो प्रकारको ग्रिड चाहिन्छ।
क्रिस्टियन Rodriguez Castellanos भन्छिन्:
म मेरो देशको क्वाड्रेन्टहरू कसरी सूचीबद्ध गर्न मद्दतको लागि सोध्दछु
डेटाको लागि धन्यबाद, मेरो क्षेत्रको क्षेत्रहरु को उपयोग को समझ को लागि म धेरै उपयोगी थियो।
धन्यवाद एक हजार ……
गुगल अर्थमा किलोमिटर लोड हुँदा म ग्रिडलाई तेर्सो रेखा मात्र देख्दिन।
धन्यवाद मेरो साथी! केवल के म खोज्दै थिएँ, अर्जेन्टिनाबाट हग
तयार, त्यहाँ तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
दक्षिणी गोलार्धको 17 सम्म 25 dxf फाइलको अलावा, कि.एम.एल ढाँचामा समावेश गरिन्छ।
मम्मी, म यो दिमागमा राख्नेछु, आशा छ कि उस्तै तनावको स्थितिमा होइन जुन यो पोष्ट थियो। यो मात्र सम्झनाले मलाई चिसो दिन्छ।
अभिवादनले तपाईंलाई दक्षिणी एमिस्फायरको ग्रिड अपलोड गर्न सक्छ
उदाहरण को लागी मैले यो पोस्टमा देखाउँछु मनिफल्ड जीआईएसको साथ, र यसलाई किमिटरमा निर्यात गर्न सकिन्छ।
तपाईं यसलाई केही डिग्री वा दूरीमा मिटरमा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाइँ रेखाहरू वा आकारहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने।
म संघर्ष गर्छु भन्छिन्:
नमस्ते, म विशिष्ट स्पेसिंगको साथ एक .kML जाल सिर्जना गर्न खोज्दैछु (उदाहरण, १.२1.25 डिग्री x १.२1.25 डिग्री, १ × १, आदि ...)। मैले zonums अनलाइन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने कोसिस गरें र यसले मेरो लागि काम गर्दैन।
कुनै अन्य उपकरणहरू मैले प्रयोग गर्न सक्दिनन्?
यो AutoCAD सँग हेर्नको लागि, तपाईंले dw को लागि kml रूपान्तरण गर्नुपर्दछ।
एडगर सेराडेल भन्छिन्:
म कसरी यो जाल आटोक्याड, मेरो मित्रमा कल्पना गर्न सक्छु?
म दुई PLATFORMS Mapinfo 10.5 र ARCGIS 9.3 तर हाल कहिले GEORREFERENCIO एक रेखापुंज यस georeferencing यसलाई सुरक्षित म फरक मिसिन मा ARCGIS 9.3 र 9.2 समस्याहरु पर्थ्यो तर जब म सम्पत्ति नदिने मलाई NINGUAN COOREDENADA स्थानिक स्वीकार न हुन काम यो समस्या कसैले थाहा भने मदत चाहन्छ गर्नुपर्छ
नमस्ते G!, तपाईं prune मलाई KML मेरो फाइलहरू निर्यात मदत, आफ्नै quadrants एक विभाजन काम, बेन्टले मानचित्र एल साल्भाडोर संग तर मेरो देश मा समन्वय सिस्टम परिवर्तन गरेर यसलाई गर्न प्रयास वृत्त को चतुर्थ 16 तर कसरी सानो छ, एक किलोमिटर र आधा दक्षिण रूपमा प्रशान्त महासागर मा फाइलहरू निर्यात गर्दा म यो मामला मा के गर्न सक्छन् किनभने म गिरावट। धन्यवाद
हेर, म सुझाव दिन्छु अनुप्रयोग पुस्तिका र AUGI MEXCCA को भिडियो
pedro vallejo eyebrow भन्छिन्:
मेरो प्रिय मित्र तपाईसँग सिभिल 3d को द्रुत कोर्स हुनेछैन किनकि यो त्यस्तो हो जुन म यस क्षणमा स्नुप गर्दैछु।
सडक, सुरंग, हाइड्रोइलेक्ट्रिक
यदि तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ म अग्रिम धन्यवाद गर्नेछु
मेक्सिको डी एफ को अराजक शहर बाट
मई, 2009 मा
र चौथो मतपत्र बक्स थोडा अनौठो कुरा हो बारेमा, म परामर्श सहमत हुनुहुन्छ संविधान REFORME (धेरै पटक उल्लङ्घन गर्ने) हो, तर वर्तमान अध्यक्ष र मंत्रिमंडल जारी गर्न चाहनुहुन्छ
छोटो कागजातहरू पठाउनुहोस् म सेवा गर्न छुट्टै छु, म धेरै गर्न सक्छु र धेरै स्तम्भहरू गर्न सक्छु।
मैले पहिले नै यसलाई अपलोड गर्न पठाएको छु
सम्पादक (मा) geofumadas.com
तपाईंको मेल मास्टर
होन्डुरस; क्षेत्र 16 र 17, निस्सन्देह यो त्यहाँ छ।
अभिवादन चौथो urn को, त्यो
मास्टर एल्भेज, म हन्डुरसबाट छु। के जाल त्यहाँ छ?
धन्यवाद margarita रान्डन भन्छिन्:
मार्च, 2009 बजे
म projective डिजाइन को विद्यार्थी हुँ किनभने म यो कार्यक्रम र CAD 2009 आवश्यकता हो, म गरिरहेको छु, धेरै राम्रो पाठ्यक्रम हो तर म CAD कार्यक्रम कमी र यो मलाई धेरै ज्ञान asentuar यी कार्यक्रम को कमी बारेमा, तिनीहरूले मलाई छ किनभने म चाहन्छु लागत धेरै prograna मुक्त foma मा, envienmen कृपया CAD र माया 1 छोड्छ: 50,000 अध्ययन गर्न, म बेरोजगार छु भनेर सम्झाउने र म सबै बेरोजगारी को खराब मौसम अध्ययन गर्न छ पारित गर्न, यो मेरो सबैभन्दा ansiolitico.muchas छ मलाई सहयोगको लागि धन्यवाद। !!!
RENE FABRICIO CASTRO भन्छिन्:
धन्यबाद, यो एक महान सहयोग हो ……………………।